Jona 3 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao
3 Ary tonga fanindroany tamin’i Jona ny tenin’i Jehovah hoe:+ 2 “Mitsangàna, ka mankanesa any Ninive, ilay tanàna lehibe, ary torio aminy ny fanamelohana+ holazaiko aminao.” 3 Dia nitsangana i Jona ka nankany Ninive, araka ny tenin’i Jehovah.+ Tanàna lehibe teo imason’Andriamanitra i Ninive,+ ka tsy maintsy dia an-tongotra telo andro vao vita ny fitetezana azy. 4 Farany, dia niditra tao an-tanàna i Jona. Ary rehefa avy nandeha an-tongotra iray andro izy, dia tsy nitsahatra nitory hoe: “Efapolo andro sisa dia horavana i Ninive.”+ 5 Dia nino an’Andriamanitra ny olona tao Ninive,+ ka nanao antso avo hoe hisy fifadian-kanina. Nitafy lamba gony koa izy ireo,+ hatramin’ny lehibe indrindra ka hatramin’ny kely indrindra. 6 Nony tonga tany amin’ny mpanjakan’i Ninive ilay teny,+ dia nitsangana niala teo amin’ny seza fiandrianany izy ka nanaisotra ny akanjom-boninahiny ary nitafy lamba gony, sady nipetraka tamin’ny lavenona.+ 7 Ary nasainy natao antso avo sy nolazaina tao Ninive izao teny izao, araka ny didin’ny mpanjaka sy ireo olona ambony: “Tsy mahazo mihinana na inona na inona mihitsy, na ny olona na ny biby fiompy na ny omby na ny ondry. Tsy misy mahazo misakafo, na misotro rano.+ 8 Ary aoka samy hitafy lamba gony na ny olona na ny biby fiompy. Dia aoka izy ireo hiantso mafy an’Andriamanitra ka samy hiala amin’ny lalan-dratsiny+ sady tsy hanao herisetra intsony. 9 Iza moa no mahalala sao mba hiova hevitra ilay tena Andriamanitra, ary hanenina izy,+ ka tsy hirehitra intsony ny fahatezerany, dia tsy ho faty isika?”+ 10 Ary hitan’ilay tena Andriamanitra ny nataon’izy ireo,+ fa niala tamin’ny lalan-dratsiny izy ireo.+ Koa nanenenan’Andriamanitra+ ilay loza nolazainy hamelezany azy, ka tsy nampihariny indray.+